June 2018 - Page 3 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 19, 2018 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Abdiweli Mohamed Ali appointed Mohamed Yousuf Mohamoud as attorney general, according to a presidential decree issued on Tuesday. Mohamed replaces former attorney general Mohamed Muse Ismail, who passed away in March […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah Maxamed Yuusuf Maxamuud u magacaabay garyaqaanka guud, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada. Maxamed ayaa badalaya garyaqaankii guud ee hore Maxamed Muuse Iamaaciil, […]
June 18, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Boqolaal qof oo ku sugan magaalaada Garoowe ayaa si nabad ah maanta oo isniin ah u qabtay banaabax looga soo horjeedo joogitaanka maamulka Somaliland ee gobolka Sool. Banaanbaxayaasha ayaa ku qeylinayay erayo ay […]
June 17, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa dib loo furay kadib dhowr maalmood oo ay xirnaayeen. Waddooyinka ugu mashquulka badan Muqdisho sida wadada Maka Al-Mukarama ayaa maanta waxaa adeegsanaya gaadiidka iyo dadka. Maalmihii ugu dambeeyay, dadka […]
June 16, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta oo Sabti ah tagay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Kadib kulan labo geesood ah oo u dhaxeeya Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raysulwasaaraha Itoobiya […]
JOINT COMMUNIQUE ISSUED AFTER BILATERAL TALKS BETWEEN H.E MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED ‘FARMAAJO’, PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA AND H.E (DR.) ABIY AHMED ALI, PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) The Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has arrived in Mogadishu on Saturday. Abiy was welcomed by President Mohamed Abdullahi Farmaajo upon arrival at Mogadishu International Airport. The two leaders are expected to hold […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta oo Sabti ah tagay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Abiy ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxmed Cabdullaahi Farmaajo. Labada hoggaamiye ayaa […]
June 15, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay xoreynta gobolka Sool. Isaga oo ka hadlayay munaasabada salaada Ciidul Fidriga oo lagu oogay garoonka kubada cagta Mire Awaaare ee magaalada Garoowe Madaxweyne […]